Infographic-7အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး 2022 ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသောခေတ်ရေစီးကြောင်း | Martech Zone
အီးမေးလ်နည်းပညာသည် ဒီဇိုင်းနှင့် ပေးပို့နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာမရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းသွင်းသူ၏အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိစေရန်၊ ၎င်းတို့ကိုတန်ဖိုးပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်ပုံနှင့်အတူ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများသည် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပါသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နှင့် ဒေတာ တို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အကြွင်းမဲ့ နှင့်သူတို့ပါဝင်သည်:
အသုံးပြုသူမှ ဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာ (UGC) – ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာကို ပေါ်လွင်စေခြင်းကို နှစ်သက်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် အမြဲတစေ တူညီမှုမရှိပါ။ သင့်စာရင်းသွင်းသူများနှင့်အတူ သက်သေခံချက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များ သို့မဟုတ် မျှဝေထားသော လူမှုမီဒီယာပို့စ်များအပါအဝင် စစ်မှန်မှုအဆင့်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Hyper-Segmentation နှင့် Personalization - သတင်းလွှာများ ပေးပို့ခြင်း၏ ခေတ်ဟောင်းအသုတ်နှင့် ပေါက်ကွဲမှုပုံစံသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ အီးမေးလ်စျေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း စာရင်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတို့နှင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းမရှိသော မက်ဆေ့ချ်များဖြင့် ငြီးငွေ့လာသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ပြီး အပိုင်းပိုင်းခွဲထားသည့် အလိုအလျောက် ခရီးစဉ်များကို ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ယခုအခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မောင်းနှင်ပေးပါသည်။
Omnichannel ဆက်သွယ်ရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝင်စာပုံးများ ပြည့်ကျပ်နေသည်... ထို့ကြောင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည် ခရီးစဉ်များတစ်လျှောက် အလားအလာများကို ရွေ့ပြောင်းရန်အတွက် မိုဘိုင်းသတိပေးချက်များ၊ စာသားမက်ဆေ့ချ်များမှတစ်ဆင့် ပစ်မှတ်ထားသည့် စာတိုပေးပို့ခြင်းကို ပေါင်းထည့်လျက်ရှိသည်။
Augmented Reality/ Virtual Reality - အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုအများစုသည် ယနေ့ခေတ် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် စာရင်းသွင်းသူများအား တိုးမြှင့်အဖြစ်မှန် ပါဝင်သော အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာသို့ ချောမွေ့စွာ ကလစ်နှိပ်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ပေးဆောင်သည် (AR) နှင့် virtual reality (VR).
interactive - ဒစ်ဂျစ်တယ် အတွေ့အကြုံများကို ဧည့်သည်များ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် တိုက်ရိုက် နှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် ကူညီပေးသည့် ပိုမို အရည် အချင်းရှိပြီး သဘာဝ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်များက လက်ခံနေပါသည်။ အီးမေးလ်သည် ဤအတွေ့အကြုံများအတွက် ပကတိအစပြုသည့်အချက်ဖြစ်ပြီး တုံ့ပြန်မှုကိုဖမ်းယူသည့် ပထမဆုံးမေးခွန်းကို စတင်ကာ အတွေ့အကြုံတွင် နောက်တဆင့်ကို အပိုင်းပိုင်းခွဲထားသည်။
မိုဘိုင်း Optimization - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည် ဒက်စ်တော့အတွက် အီးမေးလ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်နေဆဲဖြစ်သည် - သေးငယ်သောစခရင်အတွက် အခွင့်အလမ်းများနှင့် အီးမေးလ်များကို အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပြီး အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်မှုတို့ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ပလပ်ဖောင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော သင့်အီးမေးလ်၏ မိုဘိုင်းသီးသန့်ကဏ္ဍများကို ထည့်သွင်းရန် အချိန်ယူခြင်းသည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ဒေတာကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၏ အရေးပါမှု - Apple သည် ၎င်းတို့၏ iOS 15 Mail အက်ပ်ကို ခြေရာခံပစ်ဇယ်မှတစ်ဆင့် အီးမေးလ်ဖွင့်သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ဖမ်းယူခြင်းမှ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းများကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ ကွတ်ကီးခြေရာခံခြင်း ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကို အလွန်အကျွံမလွန်ကဲဘဲ စာရင်းသွင်းသူများအား ကူညီပေးရန်အတွက် URL များပေါ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လှုံ့ဆော်မှုခြေရာခံခြင်းကို အသုံးပြုရပါမည်။
ဤသည်မှာ Omnisend ဒေတာကို အခြေခံ၍ Red Website Design မှ ဖန်တီးထားသော ဤကောင်းမွန်သော infographic infographic အပြည့်အစုံမှာ-7Email Marketing Trends 2022 တွင် Business Owner & Marketers အားလုံး သိထားသင့်သည်။.
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် အကြွင်းမဲ့ ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ငါ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: ပန်းသီးအီးမေးလ်ခြေရာခံလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်အပြုအမူဒေတာ privacy ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများအီးမေးလ်ကအဖြစ်အပျက် - မောင်းနှင်hyper-segmentအပြန်အလှန်တုန့်ပြန်သောiOSiOS 15မိုဘိုင်းအီးမေးလ်မိုဘိုင်း optimizationomnichannelomnisendpersonalizationဝဘ်ဆိုက်အနီရောင်ဒီဇိုင်းအစပျိုးအီးမေးလ်အသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုvirtual reality
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး မက်ထရစ်များ- သင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသင့်သည့် အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းကိန်း ၁၂